Atsaharo ny doro tanety! – 2424.mg
Vonjeo e! Mihamaty tsikelikely Madagasikara! Atsaharo ny doro tanety! Manomboka eny amin’ny fokontany ka hatrany amin’ny governemanta, na ho an’ny filoham-pirenena voafidy manaraka eo : raiso ny andraikitrareo. Mandrapahatongan’izany aloha dia mitomany ny ala may isika.